Izinkinga ekhempini yeChiefs koweCaf - Ilanga News
Home Ezemidlalo Izinkinga ekhempini yeChiefs koweCaf
Izinkinga ekhempini yeChiefs koweCaf
UHunt unengebhe ngokulimala kukaRamahlwe Mphahlele
URAMAHLWE Mphahlele weKaizer Chiefs onokuthinteka.
USIZI luzwa olunye ekhempini yeKaizer Chiefs njengoba izinkinga zanda kunokuba zinciphe.
IChiefs izobhekana neBamenda FC yaseCameroon emlenzeni wesibili we-Caf Champions League kusasa ngoLwesihlanu ngo-18h00 eFNB Stadium, eSoweto.
Emlenzeni wokuqala obungeledlule ekuhambeni iChiefs inqobe ngo-1-0.
UGavin Hunt ololonga iChiefs ubalisa ngezinkinga athi ziyanda kunokuthi zinciphe eqenjini lakhe.
Kunovalo ngoRamahlwe Mphahlele ongazange awuqede umdlalo obusekuhambeni ngenxa yokulimala.
Uthi bakhona nabanye abadlali bakhe abanokuthinteka.
“Ngeke sizilolonge ngesivinini esiphezulu ngaphambi kwalo mdlalo wangoLwesihlanu, sizoshaya izinto ezincane ukuze abadlali bethu babuyelwe wumfutho.
“Nakhona sisazobona ukuthi ngobani abakhona ngoba kubukeka sengathi sinezinkinga ngabadlali abambalwa.
“Ngihlalele ovalweni nje lokuthi le nto ingasithikamezi uma sesiya emdlalweni weligi neBlack Leopards.
“Sinenkinga enkulu ngoMphahlele odonseke umsipha ethangeni ngemuva.
“Kodwa-ke sisazosihlola isimo sokulimala kwakhe nokuthi uzoba yingxenye yini yalo mdlalo,’’ kusho uHunt.
Ukulimala kwalo mdlali kuletha usizi ekhempini yeChiefs njengoba uHunt efike u-Eric Mathoho odlala emuva elimele kanti manje sekunovalo ngo-Mphahlele. UMathoho akayidlalanga imidlalo emibili yokuqala yeMTN8 njengoba eze wabuya kowomlenze wesibili we-semi final bedlala ne-Orlando Pirates lapho ekhishwe khona ngekhadi elibomvu. Ubengekho bedlala neGolden Arrows nakoweSwallows njengoba ezokhuza ibuya koweLeopards.
Kuvele kulimele uSamir Nurkovic ongumgadli ongakaze alikhahlele ibhola ngale sizini.
* Khonamanjalo, iBloemfontein Celtic izodudulana neManiema Union yaseDemocratic Republic of Congo emlenzeni wesibili weCaf Confede-rations Cup ngoMgqibelo ngo-15h30 eDr Petrus Molemela Stadium, eFree State.Emlenzeni wokuqala obusekuhambeni iCeltic inqobe ngo-2-0.
Previous articleUphenduke ihlaya enkantolo “umama webhantshi”
Next articleKuhlehle umngcwabo kugula unina kaNgcongca